IDM နှင့် ဖြေရှင်းနည်းနေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
ဒီ အကြောင်းအရာလေးကို ရေးဖို့တော့ အတွေးပေါက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တွေ့ နယ်ပယ်မှာ တကယ်ကို အဆင်မပြေတာလေးတွေကို သွားတွေ့တာနဲ့ လူတိုင်းလုပ်တက်စေဖို့ ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါ။ တကယ်တော့ သိသွားရင် မခက်ပါဘူး။ မသိခင်တော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါကို လူတိုင်း သိပြီးသားစကားပါ ။IDM ပြသနာကို တက်လာပြီဆိုရင် လူတော်တော်များများ တွန့်သွားကြတယ်။ဒီပြသနာက
တကယ်တန်းတော့ မခက်ပါဘူး. .. ကဲ့ပြောနေတာ ကြာပါတယ်။ ဖြေရှင်းမယ့် နည်းလမ်းတွေ ကြည့်ကြရအောင်...ဒါနဲ့ စကားမစပ် မိသားစုမှာ စာမရေးတာ ကြာပါပြီ ဒီနေ့က စပြီး စာပြန်ရေးပါတော့မယ်။
IDM ကို Activate လုပ်နည်း ဆိုပေ့မယ့် ဆော့ဝဲတော်တော်များများကို ဒီနည်း တွေနဲ့ပဲ့ Activate လုပ်ရပါတယ်။ ဒီတော့ အောက်က နည်းလမ်းတွေ အကုန်လုံး လိုက်လုပ်နေရမှာလားလို့တော့ ပြန်မမေးကြပါနဲ့ … အဆင်ပြေရာ တနည်းနည်း နဲ့ Activate လုပ်နီုင်ပါတယ်။ တနည်းနည်း နဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမ နည်းလမ်း..
ပထမဆုံးနည်းလမ်းကတော့ Crack နဲ့ ဖြေရှင်းမယ့်နည်းလမ်းကို အရင်ဆုံး စြေ့ပာပြပါ့မယ်။
ဒီနည်းလမ်းကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး နမူနာ အနေနဲ့ ကျွန်တော် IDM မှာ crack
ရော patch ရော.. Keygen ရော ပါတဲ့ ဖိုင်ကို အရင်ဆုံးဒေါင်းလိုက်ပါ... http://www.multiupload.com/3NMGZCO6M6
IDMan ဆိုတာလေးကို Copy ကူးပြီး ကျွန်တော်တို့ IDM ရမ်းခဲ့တဲ့ Location ထဲ့ကို သွားရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လို location လည်းဆိုရင် အောက်မှာ နမူနာ ပြထားပါတယ် "C:\_Program Files\_Internet Download Manager\_IDMan.exe"
IDMan ဆိုတဲ့ Copy ကူးလာတာလေးကို Paste လုပ်ရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ အရင်ရှိပြီးသား IDMan ကို ဖျက်ပစ် ပြီးမှ ထည့်လည်း ရသလို မဖျက်ပဲနဲ့ Copy and replace လုပ်လည်း ရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့
ကျွန်တော်တို့ Window က 32 bit လား 64 bit လား သိရပါမယ် ။ 32bit ဆိုရင် 32 regkey ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Merge လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ ဒါဆိုရင် Crack ချိုးလို့ ပြီးပါပြီ။ Full version ရသွားပါပြီ။ IDM Cracker tool ဖြင့် Activate လုပ်နည်း..
"C:\_Program Files\_Internet Download Manager" အဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့
ကျွန်တော်တို့ Start ကို နိုပ်လိုက်ပါ။ အောက်ညာဘက်ခြမ်းကလို အစိမ်းလိုင်းအပေါ်ထိ တက်လာတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ သူက Activate လုပ်လို့ ပြီးပါပြီဆိုတာကို Box လေးနဲ့ တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းက ပိုလွယ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီနည်းကတော့ အရင်နည်းတွေ အတိုင်းပဲ့ ‘ဒီ Program ရမ်းထားတဲ့ Location ကိုပဲ့ သွားရဦးမှာပါပဲ့... ဒီအောက်က နေရာလေးပေါ့ "C:\_Program Files\_Internet Download Manager"
ရောက်ပြီဆိုရင် Patch ကို Copy ကူးပြီး ဒီ Location folder ထဲကို ထည့်ပေးပါ။ နောက် ညာကလစ်ထောက်ပြီး Run as administrator နဲ့ ရမ်းပါ။ အောက်ကလို Box လေး တပ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ first name. last name ထည့်ပေးရပါမယ်။ တခုထည့်ပေးပြီးတိုင်း Ok ပေးရပါမယ်။ သူဘာသာ Serials ကိုတော့ ဖြည့်သွားပေးပါလိမ့်မယ်။
Location ကိုပဲ့ သွားပြီး Paste လုပ်ပေးယုံပါပဲ။ Paste လုပ်ပြီးတာနဲ့ Run as administartor နဲ့ ရမ်းလိုက်ရင် သူ့ဘာသာ Activate လုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ Keygen နှင့် Activate လုပ်နည်း...
အဆင်ပြေသွားတာ ရှိသလို အဆင်မပြေတဲ့အခါတွေလည်း ရှိတာယ်.။ အဆင်ပြေတာတော့ များပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်နည်းလေး သိထားရင် အကုန် အဆင်ပြေမယ်
မဟုတ်လား... အဲ့တော့ အောက်ကလို ပေါ်နေတဲ့ Box လေးတပ်လာရင် ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါ...အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာက
Keygen ကို ဖွင့်ရပါမယ် Keygen
ထဲ့က Serials ကို ကူးSerials number ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ထည့်ပြီး First name last name နဲ့ Email ကိုတော့ ကြိုက်တာ ထည့်ပါ။ ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလို ထည့်ပြီးပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Full version ရပါပြီ။
ဘာမှ မလုပ်ချင်သူတွေတွက်တော့ သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ဘာမှကိုလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ အထဲ့မှာ ပါတဲ့ IDM setup ကို ရမ်းပေးလိုက်တာနဲ့ သူဘာသာ Auto activate လုပ်ပေးပါတယ်။ လိုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Auto activate http://www.multiupload.com/35VBOS3299
ဟီးဟီး ၊ အကို က ကျောင်းဆရာ လုပ်ရမှာ အခုအချိန်လောက်ဆို ကျောင်းအုပ် ဖြစ်နေလောက်ပြီ ။ ဟီးဟီ့၊ စတာပါ အကို ၊ မသိတဲ့ သူတွေအတွက် ကွင်းကွင်း ကွက်ကွက် မြင်သွား တယ် ထင်တယ် အကို ၊ အကို့ရဲ့ စေတနာ ကို အရမ်း လေးစား ပါတယ် ၊ အကို့ အချိန်အရမ်းပေးလိုက်ရမယ်နဲ့ တူတယ် မသိတဲ့ သူတွေ အတွက် ရော သိတဲ့ သူတွေ အစား ကျွန်တော် က ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ့ရစေ ခင်ဗျာ့ ၊ Gallentboyz™
Very very thank you. brother carry on
မြန်မာမိသားစုအဖွဲ့ဝင်တွေက အရမ်းကိုလေးစားဖို့ကောင်းနေပါပြီ...အမြဲတမ်းအားပေး လေ့လာနေပါတယ်အစ်ကိုရိုသေလေးစားစွာဖြင့်-မောင်ပစ်
This post is very useful for everyone. Many thanks for this post.
thanksalot bro!!by the way! wth means OS?
ကျွန်တော် MMITD မှာ 6.07 ကတည်းက အော် နေတာ ပါဗျာ ..serial ကို ဖြည့်လိုက်ရင် fake ပြနေလို့ ... ဘာတွေမှားလို့လဲတော့ မသိတော့ပါဘူးဗျာအော်တာတော့ နေ့တိုင်းနီးပါးကို (အချိန်ပြည့်ကို လိုက်ပြီးမေးတာ အော်တာ)မရဘူးဗျာ... ...အဲဒါနဲ့ အကိုဆိုဒ်ကို mmitd က ဘဲတွေ့တော့ ဘာမှ (မလုပ်ချင်သူအတွက်) ..အခုတော့ဗျာ ကျွန်တော် အရမ်းပျော် ...အကိုရေ.....အဲနေ့ကတည်းက စာချန်မလို့ပါဘဲ ...ပျင်းနေလို့ ဂျီတော့ပ် အတ်ထားတယ်လက်ခံသေးဘူးနော် အမြဲတမ်း သတိရနေပါတယ် ဗျာ ...အားလုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း နေလုံးမှာ အရှေ့အရပ်၌စတင်တောက်လောင်ပြီထင်ထားသည့်အတိုင်း ဖေါက်ထုတ်လိုက်သည့်အခါ စက္ကန့်တံများမှာဖွဲခနဲထင်ထားသည့်အတိုင်း မျှော်ကြည့်လိုက်သည့်အခါ လမ်းမမှာအရှိုးရာတွေမြင်မကောင်းတော့ခြေသံတို့နောက် တစိုက်မတ်မတ် ပြန့်ကျဲမှုနောက်သို့လေးထောင့်ဆန်သော တစ်လက်လက်တောက်ခဲ့သောတဖတ်ဖတ်နဲ့သာ မောခဲ့ရသော ဆေးလိပ်တစ်လိပ်သာ ယုံကြည်မှုရှိရှိနှင့် ရှူရှိုက်ချင်တော့တယ်။ထင်ထားသည့်အတိုင်းပင် အဖေပြောပြမည့်ပုံပြင်ထဲမှာအလိုက်မှားမည့်ရွှေသမင်နောက်မှ ဖြည်းဖြည်းလေးလျှောက်၍ကောင်းကင်မှာ ပါးပါးလေးသာငေးလို့ရမယ့် သက်တံ့ရောင်စုံ ကိုမော့ကြည့်ဒရွက်တိုက်ဆွဲလာခဲ့တဲ့ ဦးဏှောက်ခွံတစ်လုံး ငါ့မှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းပြိန်းဖက်ပေါ်မှာတလက်လက်ထ ချင်လို့ နေရောင်တစ်ပြောက်ကိုကျွန်တော်ထိုင်စောင့်နေတယ် ရေမှုန်တွေနဲ့အတူအခုတော့လည်းအားလုံးအေးဆေးပဲရှိသေးတယ်။အော် နှင်းဆီလှိုင်းတွေ နှင်းဆီလှိုင်းတွေ။အနာရှိရင်ဆေးရှိသည်၊ဆေးမရှိ၍ ကျွန်တော့မှာအနာမရှိရ။မိုးစွေလည်းဖြည်းဖြည်းလေးဥက္ကာဇော်လည်းဖြည်းဖြည်းလေးကဗျာသည်ရှေ့မှတစိုက်စိုက်နှင့်။နှောင်းအိမ်ကျွန်တော့သူငယ်ချင်း နှောင်းအိမကဗျာ လေးကို ကျေးဇူးစကားကိုယ်စားပါ
ကျေးဇူးပဲ အကိုရေ အဆင်ပြေသွားပြီဗျ......။
ကူညီကြပါ....ကျနော် internet download manager(6.11)beta full ကိုသုံးပါတယ်.ကျနော် download ဆွဲရင် ညာဘက်ထောင့်က file ရဲ့အောက်မှာ file size မပေါပါဘူး..download ဆွဲတော့လည်း file size ကမတက်လာပါဘူး..အဲဒါလေး ကူညီပေးကြပါ.....
အကိုဆွဲတဲ့ ဖိုင်တိုင်း ဖြစ်နေတာလား ဒါမှမဟုတ် အခုဆွဲတဲ့ ဖိုင်တွေမှ ဖြစ်နေတာလား မသိဘူးအကို ..
ဘာမှဒေါင်းလုပ် ဆွဲမရတော့လို့ တိုင်ပတ်နေတာ ကြာပါပြီ၊ အခုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီအစ်ကို၊ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောင်ကိုလည်း ဒီ့ထက်မကသော အကျိုးပြူ စာများဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ အစ်ကို....
ကျေးဇူးမ္ဘာပါပဲ ပညာပါရမီဖြည့်နေသလိုလည်းဖြစ်ပါတယ် ......ကြီးပွါးတိုးတက်ပါစေ.
ကျွန်တော် Activate လဲလုပ်ပီးပိဒါပေမယ့်မရ၀ူး.... error 0x80004002 တဲ့ အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်...ဘယ်လိုဖြေ၇ှင်းရမလဲပြောပြပါဦးဗျာ......
Zay Yer Hein
ကိုနေမင်းမောင် .... လင့်တွေအားလုံး သေနေတယ် ပြန်စစ်ပေပါဦး ခင်ဗျာ....PLEASE!!!!!!
All links can not workplease help , brother
please help, brotherall links are dead ready.
idm ကဒေါင်းရင်ဖိုင်ဆိုဒ်မပါဖြစ်နေတော့ဘာမှဒေါင်းလုပ်လုပ် မရဘူး version တွေလဲပြီးဒေါင်းလည်းမရဘူးဖြစ်နေလို့ကူညီပေးပါ အရင်ကရပါတယ် ubuntu skin ထည့်ပြီးမှဘယ်ဖိုင်မှဒေါင်းမရတော့တာပါ